အိန္ဒြာ: အပြေးဝေးဖို့ပါ အဝေးပြေး
လမ်းရဲ့ အဆုံးမှာ ရွာရှိချင်မှ ရှိမှာ မသေချာတော့ ပြေးတော့ ပြေးပြီ..ကမ္ဘာ့ အပြင်ဖက်ကို..။
၂၀၀၆ က ကဗျာလေးလည်းကောင်းတယ်--
သိပ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ စာသားတွေပဲအစ်မ ...
ငေး သွား ပါ တယ်
အ ဝေး ကို.............
ပြန်စရာအိမ်ရဲ့ ကိစ္စက ခက်ခဲနေတယ် အဝေးပြေး
သိပ်ကောင်းပြီး သိပ်လှတဲ့ စကားလုံးတွေပါညီမရေ
ကဗျာဆရာမရဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ လာဖတ်တဲ့ကဗျာချစ်သူရဲ့ ခံစားချက်တွေတထပ်တည်းကျနေတဲ့အခါမှာ အဲဒီကဗျာဟာ ဖတ်ရသူအတွက် သိပ်ကိုအဖိုးတန်လှပါတယ်
တကယ်တမ်းကျတော့လည်း ထွက်ပြေးရင်းနဲ့ ပိတ်မိနေတာပါဗျာ..။
(ဒါတွေအားလုံးက ကဗျာဆရာရဲ့ ပထမပိုင်း
ဆန့်ကျင်ဘက် ကန့်လိုက်တိုက်ထားတဲ့ အခြေအနေ)
ဘဝအတွက် မစို့မပို့ ကာကွယ်ချက်လေးတွေ)
အပြေးကိုဝေးချင်ခဲ့တာပါ… အဝေးပြေး ။ ။"
ကဗျာထဲက စာသားလေးတွေကို ဆွဲထုတ်ပြီးခံစားကြည့်တာပါ...အကြိုက်တူချင်မှတူနိုင်သလို
အမြင်လဲတူချင်မှတူမှာပါ...အရင်ကဗျာတွေလို တစ်ပိုဒ်ဆီ ခွဲပြီးသပ်သပ်ခံစားရင် ပေါ့သွားလို့
ကိုမင်းရေ...။ ကိုမင်း အိန္ဒြာ့ရဲ့ အဇ္ဈတ္တကို ချဉ်းကပ်ပုံလမ်းကြောင်းအတိုင်း လိုက်ကြည့်မိတယ်...။ အမြင်ချင်း၊ အကြိုက်ချင်း၊ ခံစားပုံ၊ ချဉ်းကပ်ပုံချင်း မတူပေမယ့် ဒီကဗျာကို ကိုမင်း ဘယ်လိုချဉ်းကပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ ချဉ်းကပ်ပုံ လမ်းကြောင်းတစ်ခု လမ်းညွှန်ပေးလို့ ကျေဇူးတင်ပါတယ်...။ ကျနော်ကတော့ ဒီကဗျာကနေ အရှိန်တစ်ခု လာဟပ်လိုက်သလို ခံစားရတယ်...။ လောင်ကျွမ်းမှုတစ်ခုက ရုပ်ဝတ္ထုကို ရွေ့လျားစေတဲ့ အရှိန်ဟာ ကဗျာဆရာရဲ့ ဘ၀ထဲကိုပါ ပူးဝင်လာသလိုပဲ...။ ပြီးတော့ အဲဒီ ဘ၀အရှိန်မှာ ကဗျာဆရာကိုယ်တိုင် ယစ်မူးမျောပါနေတယ်လို့ ခံစားမိတယ်..။ နောက်ဆုံးမှာ ကဗျာဆရာပြောခဲ့သလို
ဘ၀အရှိန်မှာ စီးမျောခြင်း ပြီးဆုံးသွားမယ့် အဆုံးသတ်ဆိုတဲ့ တစ်စုံတစ်ရာကရော ဘာများဖြစ်မလဲ...။ အနုပညာလား...၊ ငွေကြေးလား...၊ အောင်မြင်မှုလား...၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာလား...၊ သေခြင်းတရားလား....၊ .... .... .... ....
ဒါနဲ့တောင် စိတ္တဇတွေအတိုင်း မိုင်ကုန်ဖွင့်ပစ်လိုက်မယ်ဆိုတော့... ...
ပြေး... အဝေး... အဝေးပြေးရေ...
..ကိုကြီးသု(မင်းသုခ) က နင့်ကိုပေးလိုက်ပါဆိုပြီး.
To say they for destruction ice
ကိုကြီးသုရော... အစ်မအိန္ဒြာရော... ကျေးဇူးပါပဲ...။ အမြင်မတော်ရင်လည်း ကိုယ့်ညီလေးလို..၊ မောင်လေးလို သဘောထားပြီး ဆုံးမပါနော်...။ အားမနာပါနဲ့...။ ရောဘတ်ဖရော့စ် ကဗျာအတွက်လည်း ကိုကြီးသုကို ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်း ပြောပေးပါဦး အစ်မရေ...။
ကဗျာကဆွဲဆောင်မှုအားကောင်းတယ်..ဖတ်ရင်းနဲ့ကိုမြောပါသွားတာ.. .. အဝေးပြေး....အဝေးပြေး...
ကဗျာလေးကို သေချာ ဖတ်သွားတယ် ..။
မကြီး ... ကျွန်တော့်အဖို့ လေးလေးနက်နက် အတွေး
တွေကို ဖြစ်ထွန်းစေတဲ့ မကြီး ကဗျာတွေကို အစဉ်အားပေးသလို နှစ်သက်မိတယ် ..။
မန့်ဖို့ရာ စကားလုံးတွေ မထွက်အောင်ကို ကဗျာက နက်နဲနေတယ် ...။
အမှန်တော့ ပြေးထွက်လို့ မရတဲ့နေရာတခုကနေ ဝေးရာကို ပြေးနိုင်တာဆိုလို့ ကဗျာပဲ ရှိတာ မဟုတ်လား...
အပေါ်က ဆရာများက အမှန်အကန်ဝေဖန် ခံစားထားတော့ (ဟယ်ရီလင်း စကားနဲ့ ပြောရရင်) နောက်လူမြည်းရင်တောင် ပိုချိုသွားသလိုပဲဗျ။ ကဗျာရဲ့ ဖတ်ညွှန်းက ကွန်မန့်ထဲရောက်နေသလိုဖြစ်သွားတယ်။ ကွန့်မန့်တွေဖတ်ပြီးမှ ကဗျာပြန်ဖတ်တော့ ကဗျာရဲ့ဓာတ်သတ္တိက ပိုကြွလာသလိုပဲ။
ကြုံတုန်းလေးပြောခဲ့ရအုံးမယ်.. ဟိုတနေ့က ပလာတာလေးစားကောင်းတယ်ဗျာ။ :D
(အာပျော်ပါ..) ကဗျာကိုဝေဖန်သလို ကဗျာဆရာမကိုလည်း နည်းနည်းတော့ စခဲ့ရမှ ကျေနပ်လို့ပါ။
အနီတွေ ရင့်နေအောင် ရွာတယ်........
မျက်တောင်တစ်ချက် ခတ်လိုက်မိတယ် ဆိုရုံလေး
သတ် ကွင်း လုံး လုံး ဖြစ် ခဲ့ ပေါ့။
ခိုဖြူတွေ လန့် ပြီးထပျံတယ်။
အမေတွေရဲ့ အသည်းနှလုံးအစုံစုံ ကျကွဲတယ်။
ကမ္ဘာမြေ က မျက်နှာလွှဲလိုက်တယ်။
ကောင်းကင်က သည်းကနဲ ငိုချတယ်။
တစ်ချက်ကလေး တို့ထိလိုက်မယ့် လက်ညှိုးသေးသေးမှာ
အဲဒီ့ စနေရဲ့ ကောင်းကင်ကို ခွစီးထားတဲ့ အနီတွေ...........
ကျန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ် ဒီလိုနေ့ရက်က မြန်မာပြည်မှာ ကုန်တိုက် ၃ခု တစ်ပြိုင်တည်းဗုံးကွဲခဲ့
ဆရာ လူအိမ် ရနံ့သစ်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ ကြက်သီးထလောက်အောင်ကောင်းတဲ့ကဗျာကိုဖတ်ပြီး..
ဘယ်သူတွေက ဘယ်သူ့ကို ဘာအာဃာတတွေနဲ့ပဲ လုပ်လုပ် ....ပြည်သူတွေကတော့ ဓားစာခံတွေပါပဲ..။
အညှိုးအတေးတွေ.၊.အမုန်းတွေ..၊မောဟတွေ..၊ စစ်ပွဲတွေ..၊ လူသတ်လက်နက်တွေ မရှိတော့တဲ့ ကမ္ဘာ...
ဒီ မေလ ၅ ရက်နေ့မှာ နှလုံးသွေး အစအနတွေပျံ့ကျဲနေသလိုမျိုး
ပူရဲနေတဲ့ နွေရင့်ရာသီရဲ့ လေရိုင်းမှာ..တံလျှပ်တွေ တဖျပ်ဖျပ်ခါနေဦးမှာလား..။
ဖေဖေသိပ်ချစ်တဲ့ ဖေဖေ့ ညီမလေးကတော့
ကိုယ်ချင်းစာ အားနာတတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အဖေ့သမီးတောင်
သိပ်ကို အောင်မြင်တက်ကြွချင်တဲ့ ဖေဖေ့သားလေးတောင် မြို့ပြကို စိတ်တွေကုန်လို့..
ဖေဖေကနေဖြစ်မယ့်တစ္ဆေဆိုတော့ လူကြီးတွေက မန်မဲလို့.။
အမှောင်ထဲကို စိုက်ကြည့်နေခဲ့ကြတာ အလုပ်တစ်ခုပေါ့...
တစ်လလောက်အတူတူနေပြီး ငါပါလိုက်သေဆိုလည်း ငါသေမှာသိလား..လို့
ငါက ငါ့မုန့်ဖိုးတွေမယူနဲ့တော့ဆိုလည်း..မယူတော့ဘူးလို့ စီးပွားရေးသမားဖြစ်မယ့် ဖေဖေ့သားလေးကပြန်ပြောခဲ့တယ်..။
ဖေဖေ့သမီးက တစ်ခုခုအထိတ်တလန့်ဖြစ်လို့နှုတ်ကလွှတ်ကနဲ ယောင်မိရင်တောင်..
"" ဖေဖေရေ ..."" လို့ တ တတ် ယောင်တတ်တဲ့ သမီးပါ ဖေဖေ...ရယ်..။
ခုနေခါဆို...ဖေဖေက၆၈ နှစ်အရွယ်လူအိုကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့....။
၄၃ နှစ်မှာတောင်ဖြူစပြုနေတဲ့ ဖေဖေ့ဆံပင်တွေဟာ...
မမ ငါ မှန်ကြည့်နေတာသေသေချာချာ...
.ငါ့ နှုတ်ခမ်းတွေက ဖေဖေနဲ့တူတာပဲနော်..မမ တဲ့...
ဖေဖေ့ကို ခပ်ဝါးဝါးပဲမှတ်မိတဲ့ ဖေဖေ့သားလေးက ဖေဖေနဲ့ အရမ်းတူချင်ခဲ့တယ်..။
သမီးကြီးကအဖေတူတယ်ဆိုတာကို ဖေဖေ့သမီးက ဂုဏ်ယူမဆုံးပေါ့ဖေဖေ ၊
လက်ချောင်းခြေချောင်းတွေကို ဖေဖေ့သားလေးက ကဲ့ရဲ့တိုင်း
ဟေ့ ငါက ဖေဖေနဲ့ တူလို့ မလှတာ ဘာဖြစ်လဲ လို့ အနိုင်ပိုင်းနေကြပေါ့..။
ဖေဖေ့သားနဲ့သမီးက အမျိုးထဲကတစ်ယောက်ယောက်များ ကလေးရရင်..
ဖေဖေ့လို ရင်ဘတ်မှာ မှည့်တစ်လုံးပါလာမလား..၊
သမီးကြီး ဒါမှမဟုတ် သားငယ်လေး လို့များလှမ်းခေါ်လိုက်မလားပေါ့......။
သူ့သား ၊ သမီးတွေရဲ့ ရူးသွပ်မှုကို မေမေကကြင်ကြင်နာနာနဲ့ရယ်မောလို့..။
သမီးတို့ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေရတာပေါ့ ဖေဖေရယ်..။
ဖေဖေ့သမီးက...ဖေဖေ့ ရုပ်ပုံပန်းချီတစ်ခုကားချပ်တွေဆွဲလို့......ရင်ထဲကအနာတွေကို ၀တ္ထုတွေကဗျာတွေဖွဲ့သီလို့..
သမီးကမေမေ့အတွက် ညဉ့်သိပ်ခရီးဆိုတဲ့ ၀တ္ထုတစ်ပုဒ်လဲ ရေးဖြစ်ခဲ့သေးတယ်ဖေဖေ..။
ဘ၀တွေ သိပ်ကြမ်းခဲ့ရတာပေါ့ ဖေဖေရယ်...။
အဖေနင်းဖြတ်ခဲ့တဲ့ ဘ၀ရဲ့ ဆူးတောအပြည့်နဲ့လမ်းထဲ
အဖေပေးသွားခဲ့တဲ့ မြေပုံလမ်းပြ Compass လေးနဲ့
ရှည်လျားလွန်းတဲ့ လောက တောနက်ထဲ ကျွန်တော်ရောက်နေပြီ အဖေ
သင်ကြားသွားခဲ့တဲ့ အဖေရဲ့ စကားသင်ခန်းစာများနဲ့
တန်ဖိုးတွေ နားလည်ခဲ့ပြီ အခွင့်ရှိသေးရင် ကြားချင်တယ် အဖေ
ဖေဖေ့ မဟုတ်ရင်မခံတတ်တဲ့သွေးတွေက ဖေဖေ့သမီးကိုထဲမှာ တဒီးဒီးစီးလို့ပေါ့ဖေဖေ..။
အဖေပြီးအောင်မလျှောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ခရီးကို.သမီးက ဆက်လျှောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေမိခဲ့တာပေါ့..။
အခု ၂၅ နှစ်မြောက်ဖေဖေ့သေခြင်းတရားနေ့မှာ..ဖေဖေ့သမီးကဗျာဆရာမက ဖေဖေ့ကို ကဗျာနဲ့ဆွမ်းသွပ်ဦးမှာတဲ့..။
အဖေမရှိတဲ့နောက် . . .
လူလားမြောက်တဲ့နောက် . . .
ဒုက္ခတွေ ထည်လဲ တွေ့တဲ့အခါ
တခြားလူ မရှိဘူး ကျွန်တော်အတွေးမှာ
ဒီကဗျာ မဟောသဓါ မဂ္ဂဇင်းမှာပါလာတော့ အိန္ဒြာဟာ ကိုယ့်ကလောင်ကိုယ်ငဲ့ ပြီးဒီကဗျာမျိုးကို
ဟင်္သာတGTI ပထမနှစ်မြို့ပြ ကျောင်းသူဘ၀က တမာလမ်းကရှိုက်သံများဆိုတဲ့ ကဗျာစာအုပ်လေးမှာ..
ငယ်နုတဲ့အတွေးအရေးတွေနဲ့ ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးပေါ့ .
ငြိမ်းချမ်းဧကရီမှာ ရှိုက်သံတွေဝေစည်ခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးပေါ့..။
ဒီကဗျာဟာ မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်နဲ့ တစ်ထိုင်တည်း.ပြင်စရာမလိုအောင်
ဆယ်နှစ်သမီးက နှလုံးသားကို ထုတ်ချင်းခတ်စိုက်ဝင်နေတဲ့ မြားတစ်စင်းကို
အသက်၂၀ နီးပါးမှာ ဆွဲနှုပ်လိုက်တဲ့ သွေးစသွေးနတွေလို ကဗျာပါ..လို့..
ဒီကဗျာမျိုးစာမျက်နှာပေါ်ပါရသလား..ဆိုတာအတွက် အိန္ဒြာက ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးလို့လေ...။
ရှစ်ဆယ့်လေးရဲ့ မေ ( ငါး)
အနိဌာရုံရဲ့အဖုံး ၊ အလှပဆုံးဖြစ်အောင်
ဒီဘက်နားမှာ ဆန်ကောတွေနဲ့ ဆန်ပြာ၊
ဟိုဘက်နားမှာ ကြက်သွန်နွှာ ငြုတ်ထောင်း
ဖခင် အနားမှာ ငါဟာ
ငါတို့ ဖေဖေဟာ ငါတို့ကိုသိပ်ချစ်တာလေ..
ငါတို့ဖေဖေဟာ စက်ပြင်ကောင်းတဲ့ ဆရာလေ..
ငါတို့ဖေဖေဟာ ပုံဆွဲကောင်းတဲ့ ဆရာလေ..
ဖခင် ရိုးသားစွာ ပျော်ခဲ့တာပါနော်....။
အမေ ရိုက်တော့ မကြိုက်ပါတယ်
ငါ့အသက်ရှင်ရာဟာ ဒီ သားနဲ့ သမီးပါလို့
ခဏဖြစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါလား .. ဖေဖေ
၀မ်း မြောက် ပါ စေ တော့ ။ ။
(ကွယ်လွန်ခြဲ့ပီးသော ဖခင် နှင့် ကျေးဇူးရှင် မိခင်ကြီးအား ဦးထိပ်ပန်ဆင်လျက်)
(၅ရက် ၅လတိုင်း အတွက်)
အခု သွေးထိုးနေတဲ့ ဆာလောင်မှုဟာ..
ခုတော့ မင်းက ငါ့ဘေးနား
ခုတော့ ငါ့လက်က ငါပစ်ရမယ့်ပစ်မှတ်
ငါချစ်တဲ့ အနက်ရောင်အတိုင်း အော်လိုက်မယ်
ရှိရှိသမျှ ကြွက်သားနဲ့...။ ။
( ချစ်သောကဗျာဆရာမ ဆီလ်ဗီယာပလာသ့် ၁၉၃၂-၁၉၆၃ သို့)
(လူစီရဲ့ အမှုန်အမွှားကင်းတဲ့လက်ဆောင် ကဗျာစာအုပ်မှ)
(ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် လှပစူးရှတဲ့ ကဗျာမျိုးတွေရေးပြသွားတဲ့ ကဗျာဆရာမက
သူ့မရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာ ဘာတွေစဉ်းစားသွားမလဲဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးဝင်လာတဲ့အခါ..
ဆရာဝင်းမြင့်ရဲ့ဒီကဗျာကို သတိတရ ဖွင့်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်..။)
at 6:44 AM9comments
ဖောက်လွှဲဖောက်ပြန် လောကကြီးထဲက ပြေးထွက်လို့ မရပေမဲ့
အဝေးက .... မောသွားပါတယ်။
ကဗျာလေးကောင်းတော့ အဝေးပြေးနဲ့ အတူပြေးမိလို့ထင်ရဲ့